LAHATENIN’NY FILOHA TANY NEW YORK : Tsy mitsanga-menatra eo anatrehan’ izao tontolo izao i Madagasikara
Tsy mitsanga-menatra. 27 septembre 2021
Teboka maro izay manasongadina ny maha izy azy an’i Madagasikara no navohitran’ny Filoha Malagasy, Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony teo anivon’ilay fihaonana an-tampony faha-76-n’ny Firenena mikambana izay tanterahina any New York.
Feno ny fandraisam-pitenenana nataon’ny Filoha Andry Rajoelina teo anivon’ny Firenena mikambana. Nirehareha ny Filoha ary nasongadina tamin’izany ireo teboka mafonja voafehin’i Madagasikara na dia teo aza ny fandalovan’ilay valanaretina “Covid – 19” izay nampiondrika ny firenena maro manerana an’ izao tontolo izao.
Nambarany fa tsy ireo firenena afrikanina ihany fa na hatramin’ireo firenena matanjaka aza dia nizaka ny voka-dratsy teo amin’ny lafiny ara-toekarena noho ny “Coronavirus”. An-tapitrisany maneran-tany, hoy izy, ireo olona very asa ary nisy tamin’ireo no teto Madagasikara. Tsy nitsanga-menatra ny Filoha raha nilaza fa nanana ny nampiavaka azy i Madagasikara tamin’ny paikady noentina nandresena an’ity valanaretina ity dia ny fampiasana ny fitsaboana nentim-paharazana.
“Hatramin’izay raha vao firenena an-dala-pandrosoana na firenena afrikanina dia ratsy foana izay no ao an-tsaina. Mila atsahatra amin’izay izany fomba fijery, sy fitsarana diso ny firenena afrikanina izay manomboka izao”, hoy raha fintinina ny nambaran’ny Filoha. Nirehareha ny Filoha Malagasy fa nahavita na tsy naharesy tanteraka aza ny “Covid – 19” dia azo lazaina ho isan’ireo firenena nanana vahaolana nanoherana izany i Madagasikara ary nahomby.
Ho maodely aty Afrika i Madagasikara
Ankoatra izay dia noresahin’ny Filoha Andry Rajoelina tao anatin’ny lahateniny ihany koa fa manana vinam-pampandrosoana maty paika ny tenany hanovana endrika tanteraka an’i Madagasikara mba ho sangany sy ho maodely aty Afrika. Betsaka, hoy izy, ny tetikasa hotanterahina raha tsy hilaza fotsiny ny eo amin’ny lafiny fahasalamana dia ny fananganana hopitaly manara-penitra, hopitaly fototra eny anivon’ny Kaominina.
“Izahay ihany koa dia manana vina goavana eo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena satria ny fanatanjahantena no mampiray ny vahoaka”, hoy hatrany ny Filoha. Noho izany, raha ny nambarany, dia fotodrafitrasa maro ho an’ny fanatanjahantena no antsangana eto an-toerana, ka tafiditra ao anatin’izany ireo kianja manara-penitra isam-paritra, ny kianjan’ny Barea izay isan’ireo kianja lehibe indrindra aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Eo amin’ny sehatry ny sôsialy dia ezaka maro no nasongadin’ny Filoha fa efa indrindra tamin’ny fiatrehana ireny fihibohana noho ny “Covid – 19” ireny. Nohamafisiny fa ao anatin’ny fanorenana tanteraka an’i Madagasikara ny Fitondram-panjakana ankehitriny. Tetikasa goavana maro no hatao raha tsy hilaza fotsiny ny fananganana trano fonenana an’arivony manerana ny Nosy.
Eo ihany koa ny fananganana fantson-drano lehibe any Atsimo izay lasibatry ny fiovaovan’ny toetr’andro amin’izao tahaka ireo firenena maro maneran-tany.
Teo am-pamaranana ny lahateniny dia niantso ny anjara andraikitra izay tandrify ny Firenena mikambana amin’ny tokony hamerenana an’ireo Nosy kely manodidina na “îles eparses” amin’i Madagasikara ny Filoha. Notanisany tamin’izany ireo dingana efa narahina sy manamarina fa nosy kely an’i Madagasikara ary tsy afa-misaraka amin’i Madagasikara ireo nosy izay giazan’ny Frantsay ireo. Hentitra ny Filoha raha nilaza fa ao anatin’ny filaminana sy fitoniana tanteraka no hitakian’i Madagasikara izany.